Navoaka |. Ny kinova vaovao an'ny Inkscape 0.92.4 Avy amin'ny Linux
Ny famoahana ny tonian-dahatsary sary maimaimpoana maimaimpoana Inkscape 0.92.4 dia navotsotra tato ho ato ary miaraka amin'izay koa ny famoahana alfa an'ny sampana vaovao 1.0 manan-danja
1 Inkscape 0.92.4 Fampisehoana vaovao lehibe
2 Sampana 1.0 Endri-javatra
3 Ahoana ny fametrahana Inkscape 0.92.4 amin'ny Linux?
Inkscape 0.92.4 Fampisehoana vaovao lehibe
En ity famoahana vaovao ity dia nahitana ny fahaizana mampifanaraka zavatra marobe, manodinkodina azy ireo ho vondrona iray manontolo, mifindra mifandraika amin'ny zavatra tokana.
Ary koa ny fahaizana manova tsimoramora ireo soatoavina rehefa misafidy loko iray amin'ny alàlan'ny fihazonana ny fanalahidy «Ctrl» raha mamindra ny slider (amin'ny toerana misy anao, ny dingana 16 dia ampiasaina amin'ny laharana 0-255 ary 10 ho an'ny elanelana 0-100).
Ao amin'ny maody baiko baiko, misy ny fanohanana amin'ny fandefasana angona sary amin'ny alàlan'ny fantsom-pamoahana mahazatra (STDOUT.
Ohatra, ianao izao dia afaka mampiasa construct toy ny "cat vector.svg | inkscape –file - –export-png img.png ».
Ny fanitarana asa haingana kokoa rehefa manodina antontan-taratasy sarotra, dia miantoka ny fitehirizana ny fanjakan'ny zavatra aorian'ny fampiharana ny extensions.
Izany dia manafaingana ny fanesorana ireo singa avy ao amin'ny sakana voafantina izay misy node be dia be.
Ny haben'ny pejy vita pirinty dia azo atao pirinty ary ampiasaina amin'ny mpanonta Canon, EPSON ary Konica Minolta.
Ny fandrefesana ny offset dia hainganana amin'ny alàlan'ny fampiasana ilay fitaovana Fatra handrefesana amin'ny maody hita maso.
Rehefa manondrana amin'ny PDF, ny haavon'ny mangarahara marina dia omena ho an'ny sary tafiditra mangarahara.
Sampana 1.0 Endri-javatra
Vantany vao Ny fanampiana ny lohahevitra hafa sy ny kisary napetraka dia nampiana ao amin'ny sampana vaovao.
Novana ny endrika fandefasana sary masina: Raha tokony apetraka ao anaty fisie lehibe iray ny sary masina rehetra, dia atolotra ao anaty rakitra hafa avy izao ny kisary tsirairay.
Ny interface interface dia nohavaozina, anisan'izany ny fiasa vaovao avy amin'ny kinova GTK + vaovao, ary koa ny kaody nohavaozina hanodinana sy hamerenana ny haben'ny varavarankely sy ny toerana misy azy.
Ny interface dia namboarina ho an'ny fampisehoana pixel avo (HiDPI).
Nanampy safidy iray ahafahanao mamaky ny teboka aotra amin'ny tatitra mifandraika amin'ny zoro ankavia ambony, izay mifanandrify amin'ny toerana misy ny famaky axe amin'ny endrika SVG (raha atao default amin'ny Inkscape dia manomboka ny tatitra ho an'ny axe Y avy amin'ny zoro ambany havia).
Ao amin'ity sampana vaovao ity dia misy ny azo ahodina sy fitaratra ny lamba. Ny fihodinana dia atao amin'ny alàlan'ny kodiaran'ny totozy rehefa mitazona Ctrl + Shift na amin'ny famaritana tanana ny zoton'ny fihodinana.
Ny fitaratra dia atao amin'ny alàlan'ny menio "View> Orientation canvas> Flip Horizontal / Flip Vertically".
Nisy fomba fampisehoana vaovao nampiana ("View-> View Mode-> Visible Hair Lines"), izay, na inona na inona haavon'ny zoom izay voafantina, dia hita taratra hatrany ny tsipika rehetra.
Ho an'ny touchscreens, trackpads ary touchpads dia misy fihetsika fanaraha-maso ampiharina amin'ny ambaratonga.
Ao amin'ny fitaovana PowerStroke, ny tsindry borosy dia mifanaraka amin'ny tsindry ampiharina amin'ny takelaka misy sary.
Nanampy ny fandrindrana fanondranana mandroso amin'ny endrika PNG.
Ny endri-javatra contour sy ny famafana ny asany amin'ny setrin'ny kontour lehibe dia mihazakazaka haingana.
Ny fahaizana manidy ny banga amin'ny tsindry iray dia nampiana amin'ny fitaovana famoronana faribolana.
Ary farany, ireo mpandraharaha Boolean tsy manimba dia nampiana ihany koa hanodinkodinana ny fampiharana ny vokany amin'ny contours (LPE, Live Path Effects).
Ahoana ny fametrahana Inkscape 0.92.4 amin'ny Linux?
Ny fananganana Inkscape 0.92.4 dia vonona ho an'ny Linux (AppImage, Snap ary PPA ho an'ny Ubuntu) sy Windows.
Alpha Edition 1.0 dia misy amin'ny endrika AppImage sy Snap.
Mba hisintomana ny fisie AppImage dia ataontsika izao manaraka izao:
Aorian'izany dia hanome alalana famonoana amin'ny:
Ary farany dia afaka mihazakazaka ny fampiharana amin'ny:
Ary ho an'ireo izay maniry ny hametraka amin'ny alàlan'ny fonosana Snap dia azo atao izany amin'ny:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Navoaka ny kinova Inkscape 0.92.4 vaovao
Rahoviana no mikasa ny handao ny gtk 2 izy ireo ary hifantoka amin'ny gtk 3?
somary ... lany andro izy ireo, arakaraka ny andehanan'izy ireo mifindra monina no mampitombo ny asa hataony
Lahatsoratra tsara! misaotra!